XIKMADAHA JIMCAHA IYO Mohamed Musa Sh.Noor | Laashin iyo Hal-abuur
XIKMADAHA JIMCAHA IYO Mohamed Musa Sh.Noor
2. Haddii aad barwaaqada jeceshahayna, daryeel dabeecada
labada socodka ku fiicanna waa:
Waan soo xigtay xikmadda, iimase suura galin in aan helo magaca qofka xikmaddan leh.
Alla hooyooy oo astaan u noqotay, Soomaalida Maxaabiista ah ee ku jirta xabsiyda Yurub, waxaan la kulmay, oo ii warramay mid ka mid ah asxaabtayda ee aan aadka isugu dhownahay, oo dhawaan ka yimid safar xagaa iyo galbeedka ah,wuxuu ii shegay dhowr waxyaabood oo aan la yaabay balse aan kasoo qaatay sadex waxyaalood, sadexdaas oo aad hoos ka arki kartaan
1 wuxuu ii sheegay in Dhallinta Soomaliyeed ay Daroogada iibiyaan, ayaga oo aan Khibrad u lahayn sida looga badbaado Askarta, kadibna lagu qabto, sidaana loogu gudbiyo xabsiyada waaween ee dalalkaas, xabsiga marka loo gudbiyana ay kula kulmaan Tacaddi aad u xun, ayaga oo u gacan gala Caddaanka murqaha waaween ee kula jira xabsiyada, sidaana lagu kufsado dumar iyo ragba, waa arin aad u murugo leh! habeenkii dadka xabsiyada ka shaqeeya, ama xabsiga ku jiri jiray oo kasoo baxay, waxay sheegeen, erayga kaliyah ee laga maqlo meeshaas uu yahay “Alla Hooyooy” oo ah, baroor uu qofku maciinsado marka ay xaaladdiisu xuntahay.
2 in Dumarkii Soomaliyeed qaar ka mid ah ay Addoomo u noqdeen raga ajaanibta ah,bulshada soomaaliyed oo lagu yaqiinay la yaabidda ay la yaabaan guursiga ay guursadaan dumarka soomaalida raga ajaanibta ah, waxaa dhacdo marka ay Gabari guursato Nin Ajnabi ah in ay ka dhex go’do bulshada kale oo la takooro, maadaama aysan bulshadu jeclayn qofka noocaas ah, maxaa ku dhaco gabadhii guursataa ajnabiga?
In Ninka Ajnabiga ah uu ogaado, in gabadhan aysan lahayn cid aan isaga ahayn, wuxuuna bilaabaa in uu ku tunto xaqeeda oo uu sida uu rabo u isticmaalo.
3 waxaayaabah ugu yaabka badan ee aan ka dhagaystay saaxiibkaa ii sheekaynayay waxaa ka mid ahaa, in qof dhan oo Soomali ah, waliba uu qofkaa soomaliya ka yimid, oo uusan ahayn qof meesha ku dhashay uu wato Eey! subxaanallah, haduu Allah iftiinka kaa il qabto meel aad u iilato ma jirto.
Walaalalayaal dhibatooyinka waa iska badanyihiin, kolayba qoraal laguma soo koobi karo, ee waxaan idin dhihi lahaa qof walba qofka agtiisa ah, ha ugu naseexeeyo wanaaga,
Soomaali dantii laga lahaa waa laga gaaray, ayaga oo kala Diin ah waa la hayaa maaanta, ayaga oo kala af ahna waa la hayaa maanta, marka Allaha inawaafajiyo towfiiqda waana mahadsantihiin
Maxaa dad badan oo la is lahaa, meel ayey bulshada ugasoo bixi doonaan lagu hungoobay!
Maxaa dad badan, camalkooda xun Alle u qurxiyay, oo wixi runta u sheegaaba u haystaan jaahiliin!
Maxaa dad badan ilbixnimo intay maqleen, xitaa wax ay xayaawanada ka xishoodeen ayagu ilbaxnimo moodeen!
Qanaacada micnaheeda maahan in aad wax walba hesho ama aad haysataa, ee waa in aad ka heshaa qanaacada ama kasoo dhex saarataa wax walba oo aad qabanayso ama haysato.